Garoonka Diyaaradaha USHAKA ee Koonfurta Gaalkacyo ayuu xaraga ka jaray Madaxweynaha Galmudug – STAR FM SOMALIA
Garoonka Diyaaradaha USHAKA ee Koonfurta Gaalkacyo ayuu xaraga ka jaray Madaxweynaha Galmudug
Maamulka Galmudug, ayaa yeeshay Garoon Diyaaradeed, kaasi oo laga furay Koonfurta Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug halkaasi oo ay ku shaqeeyaan xubnaha Maamulka Galmudug.
C/kariin Xuseen Guuleed oo shala ka degay Garoonkaasi Diyaaradeed, ayaa sheegay in si rasmi ah uu u shaqeynayo Garoonka Islamarkaana duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibada intaba ay ka soo degi doonaan.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug, ayaa sheegay inay guul weyn oo u soo hooyatay maamulkiisa tahay in la furo Garoon diyaaradeed oo ay leeyihiin Bulshada reer Galmudug ka soo jeeda.
Garoonka cusub ee Koonfurta Magaalada Gaalkacyo laga hirgeliyay, ayaa waxaa lagu magacaabaa USHAKA, iyadoo markii ugu horeysay Wafdiga Madaxweynaha Galmudug uu hogaaminaayay ay shalay ka dageen.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug, ayaa sidoo kale fariin nabadeed wuxuu u diray Maamulka Puntland oo uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo deganaanshaha shacabka labada maamul.
“Waxaa naga go’an in shacabka wada deggan Mudug, ee Puntland iyo Galmudug aan ku dadaalno sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen, waxaan u baahannahay in shacabka ay ahaadaan dad mid ah oo ka wada shaqeeya nabadda iyo amniga” ayuu yiri Guuleed.
Maamulka Galmudug, masuuliyiintooda ayaa horay u isticmaali jiray Garoonka C/laahi Yuusuf ee ku yaallo Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo, iyadoo tallaabadan Maamulka ay u tahay mid horumar ah.